၂၀၁၃ ပြီလ NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » ဧပြီလ
CCI Solutions SSL ကိုတိုက်ရိုက် Console အအပေါင်းအဖေါ်များ၏တန်းစီဇယားပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionCCI Solutions SSL ကိုတိုက်ရိုက် Console အအပေါင်းအဖေါ်များတိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်း Olympia, WA ၏တန်းစီဇယားပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် - Solid State Logic အသံနဲ့ဗီဒီယိုကနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ချိန်းဆိုမှုကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည်, CCI Solutions ၎င်း၏ USSee မှ livedesignonline အပေါ် .com
ONSIGHT ယင်း၏ Mistika အရောင်နှင့် Precision grade Panel များနှင့်အတူပြီးဆုံး Suites မောင်း
(လန်ဒန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း-ဧပြီလ 30, 2014) SGO Mistika များအတွက် Precision grade Panel ကို Las Vegas မှာထုတ်လွှင့်ရဲ့ကွန်ဗင်းရှင်း (NAB) ဒီဧပြီအမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာကြီးမားသောထိခိုက်ဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ပြပွဲဖွင့်ပွဲ၏နာရီအတွင်း, ရှေ့ဆောင်လန်ဒန်အဆောက်အကုမ္ပဏီ ONSIGHT သူတို့ရဲ့ State-Of-The-Art Mistika အဆင့်နှင့်ပြီးသွားအစုံမောင်းကိုကူညီနှစ်ခု Precision Panel များအဘို့အမိန့်ထားရှိ ...
အဆိုပါ 2014 BMSB အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Broadband မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များအပေါ်စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်အသံလွှင့်
အဆိုပါ 2014 BMSB အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Broadband မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များအပေါ်စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်အသံလွှင့်မေလ 15th, 2014 မှအစောပိုင်း Bird ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်! အဆိုပါပြပွဲဇွန်လ 25-27, 2014 ပေါ်မှဘေဂျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ exhibts နှင့်ပွင့်လင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲပိုမိုသိရှိလိုပါကကိုသွားကျေးဇူးပြုပြီး: Broadband မာလ်တီမီဒီယာအပေါ်ကို IEEE International ကစာတမ်းဖတ်ပွဲ * BMSB 2014 မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် www.pco-online.com/bmsb2014/index.html ...
Hawthorne တိုက်ရိုက်အမည်များ VP & အကောင့်ဒါရိုက်တာအဖြစ် Lauren အမ်း Bronchtein
(Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား-ဧပြီလ 30, 2014) Hawthorne တိုက်ရိုက်တစ်ဦးအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်တုံ့ပြန်မှုကြော်ငြာအေဂျင်စီသစ်တစ်ခုဒုတိယသမ္မတ & အကောင့်ဒါရိုက်တာအဖြစ် Lauren အမ်း Bronchtein အမည်ရှိသိရသည်။ သူမသည်ကုမ္ပဏီ၏ Los Angeles မြို့ဌာနချုပ်အခြေစိုက်လိမ့်မည်။ Bronchtein ဂျော့ခ်ျလီယွန်, Hawthorne တိုက်ရိုက်ရဲ့ SVP မီဒီယာနှင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမှသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကြေငြာချက် Hawthorne တိုက်ရိုက်ရဲ့ Chief Operating အားဖြင့်ယနေ့ခဲ့ ...
Shootersnyc ၏အယ်ဒီတာ Dave Bradley နွေရာသီရဲ့ဧဝကသည်ဟာသ Talent ဟာ Off ဖော်ပြပေး
(နယူးယောက်, New York ကဧပြီလ 30, 2014) ShootersNYC ၏အယ်ဒီတာ Dave Bradley ခေါ် "နွေရာသီရဲ့ဧဝကို" တစ် Hilary သစ်ကိုစီးပွားဖြစ်နှင့်အတူဟာသအစက်အပြောက်ဖြတ်တောက်ဘို့မိမိအခွက်တဆယ်ပြ "သူရဲအမှား။ " Bradley ရှည်လျားအချိန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူနှင့်အတူနောက်တဖန်တခါအလုပ်လုပ်ခဲ့, အသစ်ကပွဲချင်းပြီးအဖြစ် Dallas ရှိအဆိုပါ Richards Group မှအေဂျင်စီဖန်တီးမှုများနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမီးခိုးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအာဒံကိုဂျုံးစ်။ မှ ...
Matt Egan, Filmworkers "ခေတ်သစ်အခမ်းအနားကျင်းပ။ တောင်ပိုင်း။ ဂီတ။ "Hayden Panettiere နှင့် Belk နှင့်အတူ
CHICAGOâ€မော်ဒန် ", Matt Egan ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ Belk အသစ်တစ်ခုကြော်ငြာအတွက် Nashville ကြယ် Hayden Panettiere ညွှန်ကြားထားပါတယ်" ။ တောင်ပိုင်း။ ဂီတ။ "မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ Filmworkers ညနေခင်းရိုက်ကူးဘို့ Fame ၏အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံကျေးလက်ဂီတခန်းမတွင်တည်နေရာပေါ်ရောက်ရှိလာမင်းသမီးဖမ်းယူရသောအကြွေစေ့-operated ရုပ်ရှင်ကထုတ်လုပ်သည့်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေစီးပွားဖြစ်, များအတွက် post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအစက်အပြောက် evokes ...
ဗီတာမင် Coor အလင်းတစ်ခုရေခဲပြင်ဒမ်းဖန်တီးလိုက်တဲ့
Hybrid ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို CommonGround ထံမှအသစ်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာအသစ်က "အထူးထုတ်ဝေ" သံဗူးများ၏ဒီဇိုင်းကိုအတွင်းအပြင်သွားရောက်ကာ။ CHICAGOâ€ "ဗီတာမင်ရုပ်ပုံများရေခဲမြစ်ဖရိုဖရဲနဲ့ Coor အလင်းနှစ်ခုအသစ်အပြည့်အဝ-ကာတွန်းအစက်အပြောက်အတွက်အရည်အေးခဲနေသောဖြင့်လူနေထူထပ်ကမ္ဘာသို့ကြည့်ရှုသယ်ပို့ပါသည်။ ချီကာဂိုအေဂျင်စီ Commonground အားဖြင့်ပဋိသန္ဓေ ယူ. , အကြော်ငြာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ရရှိနိုင်အနုပညာရှင်-ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအထူးထုတ်ဝေသံဗူးမိတ်ဆက်ပေး။ ပထမဦးဆုံးအစက်အပြောက်, Crevice ...
1 ၏စာမျက်နှာ 9312345 » 102030...နောက်ဆုံး»